Tsy misy famandrihana ao amin'ny 777-200ER taorian'ny nandefasana ny fonosana farany.
fanontaniana Tsy misy famandrihana ao amin'ny 777-200ER taorian'ny nandefasana ny fonosana farany.
1 taona 4 volana lasa izay #794 by courtmtx
Rehefa avy nametraka ny 7770200ER tao amin'ny FSX aho, dia voasaritaky ny kamiao sy ny fiaramanidina virtoaly avokoa ny fitifirana.
1 taona 4 volana lasa izay #795 by Dariussssss
Fahadisoana malaza. Mila mametraka ny fitaovana famerenana ny Gauges ianao. Azonao jerena eto Rikoooo. Fitaovana iray izany, mora foana ny zava-drehetra.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: courtmtx
1 taona 4 volana lasa izay #798 by courtmtx
Tsy nanampy ilay olana ny "Tool Recovery Gauges". Heveriko ny fanandevozana ny 777-200ER na ny FSX manontolo.
Fotoana mamorona pejy: 0.268 segondra